အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်သုံး BATH TOWEL
အဆင့်မြင့် Hoel သာမက Guest House များ Motel များ နှင့် အဆင့်မြင့် တည်းခိုခန်းများ တွင် အသုံးပြုလျက် ရှိသော Bath Towel များကို တင်ပြမိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။နှစ်သက်ရာ တံဆိပ် ဖြင့် Order မှာယူသမျှကို စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ နှစ်သက်သော အရောင်များ ဒီဇိုင်းများဖြင့် order များကို အရည်အသွေးကို အဓိကထားကာ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ Cotto စစ်စစ်ဖြင့် အသုံးပြုထားသောကြောင့် နူးညံသိမ်မွေ့ပြီး ကြာရှည်အသုံးခံသည်။ အနံစွဲခြင်း၊ အစများ ရှည်ထွက်လာခြင်း နှင့် စုတ်ပြဲခြင်း မဖြစ်အောင် အရည်အသွေးကို အာမခံပြီးေ၇ာင်းချပေးလျက်ရှိသည်။
သေသပ်လှပသည့် ဒီဇိုင်းဆန်းသော စားပွဲ နှင့် ကုလားထိုင်များ ( Marble Chair &amp; Table )
Than Lwin Homemart ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ် သည့် စကျင်ကျောက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် စားပွဲနှင့် ကုလားထိုင်များကို ဖြန့် ဖြူး ရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်း စကျင်ကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် စားပွဲ နှင့် ကုလားထိုင် ( Marble Chair &amp; Table ) သည် အရည်သွေးကောင်းမွန်ပီး သေသပ်လှပသည့် အပြင် ကြာရှည် လည်းအသုံးခံပါသည်။၄င်းစားပွဲနှင့် ကုလားထိုင်များကို လူကြီးမင်းတို့ ၏ ထမင်းစားခန်းများ တွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်းစကျင်ကျောက် စားပွဲနှင့် ကုလားထိုင် ( Marble Chair &amp; Table )ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Than Lwin Homemart ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
690 ~ 690 $
300 ~ 300 $
It is bedroom wardrobe and it has two &amp; one apartment sheets. This wardrobe is made of MDF material and any design, size can be customized. It is easy to assemble and knock down. It has two columns and one column is two apartments and another column is one apartment. In the two apartment has four shelfs and one apartment has steel stand to hang your clothes and steel locker. Customerâ€™s requirement for color and design is welcomed. If you have any questions, pls feel free to contact by chat box.
လူကြီးမင်းတို့၏ စားသောက်ဆိုင်များ၊ မင်္ဂလာခန်းမများ၊ အစည်းအဝေးခန်းမများ၊ ဟိုတယ်အခန်းများ၊ ရုံခန်း ဆိုင်ခန်းများ စာသင်ကျောင်းများ အစရှိသည့်တို့အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ည်မှ ကျွန်းသစ်အစစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် လှပသေသပ်ခန့်ညားခြင်း။ သက်တမ်းကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ ကိုယ်တိုင်ထုတ်၍ ဈေးနှုန်းသက်သာခြင်း။ မြန်မာပြည်ထွက် ကျွန်းသစ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Engineering Floor များကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
ကျွန်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စာပွဲများကြိုက်နှစ်သပ်သော Customer များအတွက် ဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းများဖြင့် ခိုင်ခံသော ထမင်းစာပွဲများဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထွက်သော ကျွန်သစ် ကုန်ကြမ်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်သောကြောင့် အရည်အသွေးမှာ စိတ်ချရပါသည်။ ထို့ပြင် ပိုးမစားခြင်း ၊ ချမစားအောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ကျသော Customer များလည်းမှာယူနိုင်ပါသည်။
350 ~ 350 $
This bookcase is made of MDF medium density fiberboard by Shwe Mi Furniture. It has two structures. First structure, upper door is made by large glass door and has six evenly space shelves. Second structure, lower door is made of MDF material and has four sturdy space shelves. It is best quality and it is very practical to use. This Bookcase is suitable for office, school, hotel, hospital and home. Different color, style and size are available. It is easy to knock down structure and pre assembled. Learn more about this bookcase, you can contact by chat box.
ခေတ်မီတဲ့နေထိုင်မှုအတွက် ဖန်စီသံကုတင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နံ့သာရောင် ၊ ပန်းရောင် ၊ နီညိုရောင် ကာလာသုံးမျိုးရှိပါသည်။ကုတင်၏အားသာချက်မှာသံအခင်းပြားအပြည့်ခင်းထားသောကြောင့် အထပ်သားပြားခင်းစရာမလိုပဲ မွေ့ယာအထူ ၊ အပါး နှစ်မျိုးစလုံးကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ထိုင်းနိုင်ငံမှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းသောကြောင့် အရည်အသွေးကို ၁၀၀% စိတ်ချယုံကြည်နိုင်သည်။ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်လှပမှုကြောင့် သင့်အိပ်ခန်းကို စိုပြေလှပစေသည်။ဒီဇိုင်းစုံ ကာလာစုံ ဖြင့် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လိုလျှင် ပွင့်ဦး Showroom သို့လာရောက် ကြည့်ရှုဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
387 ~ 387 $
This is the pink color Japan style sofa settee. Arabesque and modular design, this sofa consists of one seater, two seater and three seater. This sofa is suitable for home, office, school, hotel, and so on. If you need of modern furniture, we can make any design, size, style and color. High quality, more size andabeautiful range atagreat low price for choice, if you are interested in our products, please feel free to contact us.
196 ~ 196 $
အရည်သွေးကောင်းမွန်သည့် လှပ ခိုင်ခံ့ သည့် ပန်းကန်စင် ( Plastic Rack )
Golden Home ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော အရည် သွေးကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ပန်းကန်စင် ( Plastic Rack )ကိုလူကြီးမင်းတို့ အတွက် တင်သွင်း ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက် ရှိပါ သည်။ ၄င်းပစ္စည်းသည် အလူမီနီယမ် သံထည်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည် ။ဒါ့ပြင် လူကြီးမင်းတို့ ၏ ပန်းကန်များကိုဆေးကြော ပီး သိမ်းဆည်းရာတွင် အဆင်ပြေချော မွေ့ စေရန်နှင့် သုံးစွဲ ရလွယ်ကူသည့် အပြင်သိမ်းဆည်းရာတွင်လည်း ခေါက်သိမ်းနို်င်သည့် အပြင်တစ်ခုချင်းစီ ဖြု တ်သိမ်းနိုင်သော ကြောင့် သုံးစွဲလွယ်ကုသည့် အပြင် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အသုံးဝင်သော ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း ပန်းကန်စင် ( Plastic Rack )ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလ်ိုပါက Golden Home ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
700 ~ 700 $
အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်သည့် ဖိနပ်စင် ( Shoe Rack )
Golden Home ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော အရည် သွေးကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ဖိနပ်စင် ( Shoe Rack )ကိုလူကြီးမင်းတို့ အတွက် တင်သွင်း ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက် ရှိပါ သည်။ ၄င်းပစ္စည်းသည်ပလတ်စတစ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည် ။ဒါ့ပြင် လူကြီးမင်းတို့ ၏ ဖိနပ်များကို ဆေးကြော ပီး သိမ်းဆည်းရာတွင် အဆင်ပြေချော မွေ့ စေရန်နှင့် သုံးစွဲ ရလွယ်ကူသည့် အပြင်သိမ်းဆည်းရာတွင်လည်း ခေါက်သိမ်းနို်င်သည့် အပြင်တစ်ခု ချင်းစီ ဖြု တ်သိမ်းနိုင်သော ကြောင့် သုံးစွဲလွယ်ကုသည့် အပြင် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အသုံးဝင်သော ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း ဖိနပ်စင် ( Shoe Rack )ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလ်ိုပါက Golden Home ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Coconut metric bedroom furniture
ပိုးသတ်ပေါင်းခံထားသော အုန်းဆံအလွှာပါရှိသောကြောင့် ခါးနာဝေဒနာ ရှိသူများ၊ ကျီးပေါင်းဝေဒနာ ခံစားနေရသူများ အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။တွန်းကန်အားကောင်းသော စပရိန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် မွေ့ရာ အမာကြိုက်သူများ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် သင့်တော်သော မွေ့.ယာအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ကုတင်နှင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်သလို ကုတင်မပါပဲ မွေ့ယာသီးသန့်ချည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်ပြီး လှပရုံသာမက အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သောကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကို ပယ်ပျောက်စေပါသည်။အိပ်စက်အနားယူချိန်တွင် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီး အိပ်ပျော်စေသည်။နူးညံသော အထိအတွေ့နှင့် သင်၏ တစ်ညတာ ကို ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။